भेरी अस्पतालमा मास्क छैन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
भेरी अस्पतालमा मास्क छैन
पीपीई, पन्जालगायतको पनि अभाव, दिनमा ३ सय सिलिन्डर अक्सिजन खपत
वैशाख १४, २०७८ ठाकुरसिंह थारु, मधु शाही
नेपालगन्ज — कोरोना उपचार केन्द्र भेरी अस्पतालमा उपचारका दिनहुँ संक्रमित थपिने गरेका छन् । सबैलाई बेडमा भर्ना गरेर उपचार सम्भव छैन । अस्पताल आफैं अभावै अभावबाट गुज्रिरहेको छ । यहाँ बिरामीको अनुपातमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी छैनन् ।
शनिबार संघीय सरकारसित मेडिकल टिम माग गरिएको छ । दिनमा तीन सय सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक परिरहेको छ । अस्पताल आर्थिक अभावमा छ । विभिन्न संस्थाले अस्पताललाई सहयोग गरिरहे पनि त्यो पर्याप्त नभएको अस्पतालको भनाइ छ ।
एक वर्षअघि कोरोनाको पहिलो लहरकै बेला अस्पतालका लागि साधन स्रोत माग गरिएको थियो । अभाव चर्किएपछि शनिबार संघीय सरकारसँग १० र प्रदेश सरकारसँग ५ करोड रुपैयाँ मागिएको छ । मिल्ने/नमिल्ने अनिश्चित छ । अहिले स्वास्थ्य सुरक्षाबिना स्वास्थ्यकर्मी अस्पतालमा खटिएका छन् । पीपीई, पन्जा, मास्क अभाव हुन थालेको छ । एउटा चिकित्सक/नर्सले दर्जनौं बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘बेड थपेर मात्र समाधान हुँदैन । अक्सिजन, भेन्टिलेटर चाहिन्छ,’ अस्पतालका चिकित्सक संकेत रिसालले भने, ‘मुख्य कुरा जनशक्ति हो । हामीलाई जनशक्ति अभाव छ ।’
आपूर्तिकर्ताले गत बिहीबार अक्सिजन सिलिन्डर समयमै उपलब्ध नगराउँदा करिब २ घण्टा तनाव भयो । अक्सिजन सिलिन्डर आपूर्तिकर्ताको प्लान्टमा विद्युत् ट्रान्सफर्मर बिग्रिएपछि भर्न नपाउँदा समस्या देखिएको थियो । कोभिड वार्डमा पछिल्लो समय बिरामीको चाप बढेसँगै अक्सिजनको माग पनि बढेको छ । खपत बढी हुँदा अभाव सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ । भेरी अस्पतालमा दिनमा २ सय ५० देखि ३ सय वटा अक्सिजन सिलिन्डर खपत भइरहेको छ । ‘सामान्य अवस्थामा अस्पतालमा दिनमा १० देखि १५ वटा ठूला अक्सिजन सिलिन्डर मात्रै प्रयोग हुन्थ्यो,’ भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. प्रकाश थापाले भने, ‘कोभिडका धेरै बिरामीमा अक्सिजनको माग बढेकाले खपत पनि बढेको हो ।’ अस्पतालमा रहेका अधिकांश बिरामी अहिले अक्सिजनसहित भेन्टिलेटरमा छन् ।
डा. थापाका अनुसार नेपालगन्जमा दुई वटा मात्रै अक्सिजन सिलिन्डर आपूर्तिकर्ता छन् । ती दुवैले भारतको एउटै कम्पनीबाट तरल अक्सिजन आपूर्ति गरी सिलिन्डर भरेर नेपालगन्जका विभिन्न अस्पताल, मेडिकल कलेज र नर्सिङ होममा दिने गर्छन् । अस्पतालसँग अक्सिजन प्लान्ट छैन । कोरोना भाइरसले ग्रस्त बनाएका बिरामीको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घट्दै जाँदा अक्सिजन दिएर बचाउन सकिन्छ । ‘बिरामीलाई बचाउन सकिने अक्सिजन नहुँदा उपचारमा समस्या पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ,’ डा. थापाले भने । उनका अनुसार अस्पतालसँग विकल्पका रूपमा एकै पटकमा ठूलो मात्रामा भण्डारण गर्ने क्षमता पनि छैन ।
डा. थापाका अनुसार एउटा अक्सिजन सिलिन्डरका लागि ९ सय १५ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सरकारले बिरामीको प्रकृतिअनुसार उपचार गरेबापत रकम प्रदान गर्ने गरेको छ । ‘पहिले दिनमा १५/२० सिलिन्डर ल्याउने, प्रयोग गर्ने अनि खाली सिलिन्डर फेरि भर्न प्लान्टमा पठाउने गरिन्थ्यो,’ उनले भने । अहिले माग बढेपछि अस्पतालले लिक्विड अक्सिजन ट्यांक जोड्ने योजना अघि सारेको डा. थापाले सुनाए । ‘सिलिन्डर भर्ने, लोड गर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया छ,’ उनले भने, ‘एक साताभित्र लिक्विड अक्सिजन ट्यांक जडान गर्ने योजना छ ।’ नेपालगन्जमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) ले सहयोगका लागि संघीय सरकारसँग माग गरे पनि त्यसको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
प्रकाशित : वैशाख १४, २०७८ ०८:३४
कोरोनाले क्वारेन्टाइनमै मृत्यु
अवस्था गम्भीर भए पनि अस्पताल पुर्‍याउन कोही तयार भएनन्
स्थानीय भन्छन्- भारतमा भोकले मरिन्छ कि भन्ने थियो, नेपालमा रोगले !
जेष्ठ ५, २०७७ ठाकुरसिंह थारु, मधु शाही
नेपालगन्ज — भारतबाट फर्केर बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–५ स्थित क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका युवकको कोभिड–१९ संक्रमणबाट आइतबार बिहान मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य शनिबार रातिदेखि गम्भीर बनेको र आइतबार बिहान ६ः४० मा उनको मृत्यु भएको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।
कोरोना संक्रमित युवकको आइतबार मृत्यु भएको बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–५ भोज भगवानपुरको दीपेन्द्र प्रावि क्वारेन्टाइन । मुम्बईबाट गाउँ आएपछि गत मंगलबारदेखि उनीसहित ३९ जनालाई यहाँ राखिएको थियो। तस्बिर : रेजिना मल्ल/कान्तिपुर टीभी
भारतबाट आएकाले उनको स्वाब परीक्षणका लागि शनिबार स्वास्थ्यकर्मीले संकलन गरेका थिए । आइतबार दिउँसो भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको स्वाब परीक्षणमा कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि भएको हो । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट उनको मृत्यु भएको घोषणा गर्‍यो ।
नरैनापुरसँग जोडिएको दशगजामा अलपत्र स्थानीयलाई भित्र्याएर गत वैशाख ३० गते नरैनापुर–५ स्थित दीपेन्द्र प्रावि भोज भगवानपुरमा राखिएको थियो । उक्त क्वारेन्टाइनमा ३९ जना थिए ।
कोभिड–१९ आशंका गरिएकाले युवकको अर्धनग्न शव विद्यालयको चौरमा आइतबार साँझसम्म थियो । विद्यालयमा रहेका कपडा, टेबल र कुर्सी छरपस्ट थिए । सुरक्षाकर्मीले परिवारका सदस्य र स्थानीयलाई शवनजिक जान दिएका थिएनन् । सुरक्षाकर्मीले क्वारेन्टाइनमा प्रवेश निषेध गरेका थिए । मृतकका श्रीमती, एक छोरा, दुई छोरी र बाबुले टाढैबाट शव हेरेर रोइरहेका थिए । स्थानीय खेतका आलीमा उभिएर शव हेरेका थिए ।
नरैनापुर–५ का वडाध्यक्ष कृष्णचन्द्र मौर्यले युवकको मृत्युले गाउँ शोकमग्न बनेको बताए । शव कसरी उठाउने भन्ने चिन्तामा दिन बित्यो । परिवारले शव बुझ्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
बिहान मृत्यु भए पनि अपराह्न ४ बजेमात्र स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आएकाले शव व्यवस्थापन ढिलो भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल व्यक्ति नरेश श्रेष्ठले बताए । ‘जतिसक्दो छिटो शव व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘स्वास्ब परीक्षणको रिपोर्ट ढिलो आयो, त्यसपछि परिवारलाई सम्झाएर मुचुल्का उठाउन समय लाग्यो ।’
श्रेष्ठका अनुसार आइतबार साँझ ८ बजे धार्मिक परम्पराअनुसार राप्ती किनारमा खाडल खनेर युवकको अन्तिम संस्कार गरिएको छ । शव व्यवस्थापनमा गाउँपालिका प्रमुख, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, सुरक्षाकर्मी र परिवारका सदस्यलगायतको उपस्थिति थियो । ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री लगाएर शव व्यवस्थापन गरियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘हल्ला भएजस्तो पीपीई अभाव छैन । सबैलाई संक्रमणबाट जोगाउनु राज्यको दायित्व हो ।’
युवक भारतको मुम्बईबाट गत वैशाख ३० गते नरैनापुर नाका हुँदै गाउँपालिकामा आएका थिए । ७०/८० जना समूहमा ट्रक चढेर आएका उनले एक दिन सीमामा बिताएका थिए । त्यसपछि उनीसहितलाई गाउँपालिकाले ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो । यसरी आएका मध्ये शुक्रबार ४५ जनाको स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्दा आठ जनामा कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि भएको थियो । जसमा दीपेन्द्र प्राविमा बसेका मात्रै चार जना थिए । त्यसपछि शनिबार ती युवकसहित ३ सय ५ जनाको ट्रेसिङ गरिएको थियो । शनिबार २ सय ६३ जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो । उक्त स्वाब परीक्षणमा युवकको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो ।
यी युवकमा शनिबार राति स्वास्थ्य समस्या आएको थियो । टाउको दुख्न र बान्ता हुन थालेपछि क्वारेन्टाइनमा रहेका स्वयंसेवकले जीवनजल खुवाएका थिए । अवस्था गम्भीर भए पनि त्यही क्वारेन्टाइनमा रहेका चार जनामा कोभिड–१९ पुष्टि भइसकेकाले उनलाई अस्पताल पुर्‍याउन कोही तयार भएनन् । क्वारेन्टाइनमा खटिएका स्वयंसेवकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री पीपीई, पन्जालगायतका सुरक्षा सामग्री उपलब्ध छैन । क्वारेन्टाइनमा रहेका अन्य व्यक्तिले एम्बुलेन्स बोलाउन आग्रह गरे । तर एम्बुलेन्स चालक र त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीसँग पीपीई थिएन ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साहले घटनाले सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण गरिरहेका बेला घटना भएको बताए । ‘भारतबाट आउनेको संख्या अत्यधिक रहेकाले व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट आउने क्रम रोकिएको छैन ।’ उनले भने ।
स्थानीयले क्वारेन्टाइनमा भएको लापरबाहीले युवकको ज्यान गएको आरोप लगाएका छन् । क्वारेन्टाइनबाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करिब चार किलोमिटरको दूरीमा छ । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख मोहम्मद साइद खाँले आइतबारसम्म २५ थान पीपीई, पन्जालगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री रहेको बताए । ‘एम्बुलेन्स चालकसँग पीपीईलगायतका सामग्री छन्,’ उनले भने, ‘तर क्वारेन्टाइनमा गएर बिरामी ल्याउने कोही भएनन् ।’
स्थानीय एक जनाको मृत्यु र आठ जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि नरैनापुरमा त्रास फैलिएको छ । गाउँपालिकाका २ सय ६२ को स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । ४२ जनाको स्वाब संकलन गर्न बाँकी छ । सीमामा दिनहुँ सयौंको भीड लागिरहँदा र लुकेर गाउँ छिर्दासमेत स्थानीय तहले गम्भीरताका साथ छिट्टै व्यवस्थापन गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।
गाउँपालिकामा १३ स्थानमा क्वारेन्टाइन व्यवस्था गरिएको छ । भारतबाट आएका ७ सय १८ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । स्थानीय विनय दीक्षितले मृत्युको खबरले क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू डराएको बताए । ‘सम्झाइबुझाइ राख्नुपर्ने चुनौती छ,’ उनले भने ।
‘मुलुक आएपछि डर’
भारतमै क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरेर आएका स्थानीय आशाराम यादवले अहिले रोग सर्ला कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको बताए । ‘भारतमा काम नपाएपछि भोकै मरिने डरले आत्तिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘यहाँ आएपछि कोरोनाले मरिन्छ कि भन्ने डर भयो ।’ उनले भने ।
हरियाणाको एक फ्याक्ट्रीमा मजदुरी गर्दै आएका उनी १४ दिन भारतकै क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । स्वास्थ्य परीक्षण गरीवरी ढुक्क भएर उनी घर आएका हुन् । उनी बसेकै क्वारेन्टाइनमा दुई जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । नरैनापुर–५, जयकिसन माविमा उनीलगायत ५८ जना बसेका छन् ।
कोरोनाले क्‍वारेन्टाइनमै मृत्यु हुनु भनेको सरकारको चरम लापर्बाही हो : विज्ञ
नरैनापुरका कुतमुदिन खाँ भारतको महाराष्ट्र आमननगरमा होटलमा मजदुरी गर्थे । बिरानो देशमा एक्लै बस्न नसकेर उनी ५ दिन हिँड्दै नेपाल–भारत सीमामा आइपुगे । यतिबेलासम्म परिवारकै चिन्ताले सताएको उनलाई अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्दा कोभिड–१९ संक्रमण हुने पीर लागेको सुनाए । ‘भारतमा हुँदा खासै रोगको वास्ता गरिएन,’ उनले भने, ‘स्वदेश आएपछि आत्तिएको छु ।’ पाँच दिनअघि उनीलगायत १५ जना एउटै गाउँका सीमामा आएका थिए ।
बाँकेमा ३३ संक्रमित रहेका छन् । जसमध्ये २५ जनाको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाँकेमा र आठ जनाको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुन्डी दाङमा उपचार भइरहेको छ ।
व्यवस्थापन उत्कृष्ट छ : मुख्यमन्त्री
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कोभिड–१९ संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि भारतमा भन्दा नेपालको व्यवस्थापन उत्कृष्ट रहेको दाबी गरेका छन् । जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिले आइतबार भैरहवामा आयोजना गरेको छलफलमा उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले सतर्कता अपनाउन नसक्दा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘दिल्ली, मुम्बईलगायत टाढा–टाढाबाट संक्रमित सिमानासम्म आइपुग्दा खोइ त रोकेको ?’ उनले भनेका थिए ।
सीमाबाट नेपाली आउने क्रम बढ्न सक्ने भएकाले क्वारेन्टाइनको क्षमता बढाउनेतर्फ लाग्न जरुरी रहेको उनले बताए । यसका लागि सबैभन्दा जिम्मेवार स्थानीय तह रहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । संक्रमण बढ्दो अवस्थामा रहेकाले तत्काल कम्तीमा दुई सय बेड क्षमताको आइसोलेसनको निर्माण गर्न उनले जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । यसका लागि होटल र अस्पतालमा खाली रहेको बेड प्रयोगमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७७ ०६:४०